बुद्धि तामांगका २ फिल्म, हेर्ने ‘चंगा’ कि ‘मट्टी माला’ ? « Ramailo छ
बुद्धि तामांगका २ फिल्म, हेर्ने ‘चंगा’ कि ‘मट्टी माला’ ?
यो शुक्रबार दुई नयाँ नेपाली फिल्महरु प्रदर्शनमा आएका छन् । जेठ २५ देखि फिल्म ‘चंगा’ र ‘मट्टी माला’ एकसाथ प्रदर्शनमा आएका हुन् । यी दुवै फिल्ममा कलाकार बुद्धि तामांगको अभिनय छ । दुई मध्ये तपाई कुन फिल्म हेर्नुहुन्छ ?
‘डिठ्ठा साब’को नामले चिनिने कलाकार किशोर भण्डारीले निर्देशन गरेको फिल्म हो, ‘चंगा’ । रेश्मा तिमल्सिनाले बनाएको फिल्ममा बुद्धिसँगै कमलमणी नेपाल, अंकित खड्का, लक्ष्मी वर्देवा, प्रेमवर्षा खड्का, जीवन भट्टराई र निर्माता स्वयम तिमल्सिनाको लगायतको अभिनय रहेको छ । फिल्मको कम्पनी माला गीत लाई रुचाएको छ । निर्देशक र निर्मातासँग गरिएको रमाईलो कुराकानी हेर्नुस् :
फिल्म ‘मट्टी माला’ लाई नयाँ निर्देशक टेक पौरखी राईले निर्देशन गरेका हुन् । फिल्ममा बुद्धि तामांग, रजनी गुरुंग, प्रियंका कार्की, पृथ्वी राई, शिशिर राणा, अर्जुन गुरुंग लगायतको अभिनय छ । फिल्मलाई पृथ्वीले नै बनाएका हुन् । महंगो मुल्य पर्ने मट्टी मालाको कथामा फिल्म बनेको हो । निर्देशक र कलाकार ए.गुरुंगसँग गरिएको रमाईलो कुराकानी हेर्नुस् :